Tanzania oo ka shaki qabta in dalkeeda Alshabaab ka dhashay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada ammaanka dalka Tanzania, ee ku sugan gobolka Tanga ee waqooyiga dalkaasi ayaa la sheegayaa in heegan sare la galiyay kaddib markii ay axaddii isku dhaceen koox looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Askari booliiska ah ayaa ku dhintay, shan kalana way ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada iyo dableyda hubeysan is-weydaarsadeen oo socotay muddo 20 daqiiqo ah.
Madaxa howlgallada booliiska Tanzania Paul Chagonja ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu in ay go’aansadeen in ciidanka heegan la geliyey markii ay ogaadeen in kooxaha ay isku dhaceen ay ka awood iyo taag badan yihiin burcad.
“Ilaa hadda ma xaqiijin karno, mana beenin karno in kooxdu Al-Shabaab tahay, sababtoo ah, ma aynaan xirin cid iyaga kamid ah”, ayuu yiri Chagonja oo intaas ku daray in goobtii dableyda hubeysan ay ku dhuumaaleysaneysay ay ka heleen waxyaabaha qarxa, mootooyin iyo baaskiillo.
Muuqaal bar internet-ka la soo dhigay ayaa lagu sheegay in weerarka ay Al-Shabaab ka dambeysay. Muuqaalka oo ka koobnaa luuqadaha Carabiga iyo Sawaaxiliga ayaa loogu baaqay dhallinyarada reer Tanzania in ay Al-Shabaab gacan ka siiyaan dagaalka ay ku jirto.
Al-Shabaab ayaa horay weerarro uga geysatay dalal ku yaalla gobolka, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Uganda. Waxaana la sheegaa in dhalinyaro badan Tanzanian ah ay Soomaaliya ka dagaalameen, iyagoo la safan Alshabaab.